Haddii shaqada laygu dhaawaco lacag ma la i siiyaa? Shilalka Shaqaalaha -
Bogga ugu weyn Haddii shaqada laygu dhaawaco lacag ma la i siiyaa? Shilalka Shaqaalaha
isha sawirka: juanlaw
Ma ka shaqeysaa jawi khatar sare leh? Hadday haa tahay, markaa maqaalkani adiga uunbaa adiga ah. Ha ka welwelin, loo-shaqeeyahaagu wuxuu qaadi doonaa dhammaan khasaaraha haddii aad dhaawacdo adigoo fulinaya waajibaadkaaga. Had iyo jeer, waxaad heli doontaa mushahar haddii aad ku dhaawacdo shaqada.
Intaa waxaa dheer, haddii dhaawacyadaadu ay yihiin kuwo halis ah oo kaa celin kara inaad ku soo laabato shaqada wakhti go'an, waxaad heli doontaa boqolkiiba mushaharkaaga caadiga ah magdhow ahaan.
Sidoo kale, waxaad haysataa doorashooyin kale iyadoon loo eegin bixinta hore ee shirkadda caymiska. Haddi soo jeedinta hore ay ku filnaan waydo, qareenka magdhawga shaqalaha ayaa kaa caawin kara inaad raadsato heshiis si fiican u daboolaya kharashaadka daawaynta.
Waxaan rajeyneynaa in tani ay ka jawaabtay qaar ka mid ah su'aalaha aad hayso? Aan sii wadno.
Yaa Bixiya Magdhowga Dhaawacyada Shaqada?
Shaqaale ahaan, loo-shaqeeyahaagu waxa looga baahan yahay sharcigu inuu ku siiyo qayb ka mid ah mushaharkaaga inta aad ka soo kabanayso dhaawacaaga shaqada. Si kastaba ha ahaatee, loo-shaqeeyahaagu si toos ah ugama bixin doono lacagta shirkadda.
Wadamo badan, waa qasab in dhammaan ururada, iyadoon loo eegin baaxadda, inay helaan caymis ku filan magdhowga shaqaalaha. Caymiskani wuxuu daboolayaa kharashyada caafimaadka marka shaqaaluhu ku dhaawacmo shaqada.
Sida muuqata, haddii aad ku dhaawacanto adigoo shaqadaada qabanaya, shirkaddaada caymiska ayaa mas'uul ka ah inay daboosho magdhowga lagugu leeyahay.
Maxaan Sameeyaa Kaddib Shilka Shaqada Si aan U Hubiyo In Lacag Lagu Siiyo?
Muhiimadaada koowaad ka dib shil shaqada waa dabcan caafimaadkaaga. Haddii aad si xun u dhaawacanto, wac ambalaas oo codso saaxiibkaaga inuu ku qabto hab-raacyada kale ee magacaaga.
Tani waa in la xafido diiwaanka shilka kaas oo taageeraya sheegashada magdhowga.
Mar labaad, isla markaaba dhacdada u sheeg maareeyaha goobtaada oo sidoo kale ku samee warbixinta dhacdada oo qoran buuga shilka. Tani waxay ilaalinaysaa xuquuqdaada iyadoo hubinaysa in loo-shaqeeyahaagu aanu dafiri karin aqoonta in shilku dhacay.
Weydii saaxiibka shaqada inuu sawirro ka qaado dhaawacyadaada haddii aadan adigu awoodin inaad sidaas sameyso. Sawir ka qaad goobta shilku ka dhacay sidoo kale. Sawirro iyo muuqaalo muujinaya waxa sababay shilka ayaa noqon kara caddaynta ugu adag ee aad bixin karto si aad u taageerto sheegashadaada. Aad bay u adagtahay in la iska indho tiro caddaynta sawireed ee xooggan.
Haddii ay suurtagal tahay, hesho magacyada iyo xiriirka qof kasta oo goob joog u ahaa dhacdada. Bayaanka markhaatiga waa qalab kale oo xoojin kara sheegashadaada oo hubin kara in lagu siiyo dhaawaca shaqadaada.
Mushahar noocee ah ayaan filan karaa ka dib dhaawac shaqada?
Caadi ahaan, waxaa jira afar nooc oo faa'iidooyin ah oo aad ka heli karto dhaawac shaqada ka dib:
Magdhaw todobaadle ah
Faa'iidooyinka daciifnimada joogtada ah
Faa'iidooyinka saxda ah ee aad heli doonto waxay ku xirnaan doontaa dhaawaca iyo sida ay u saameeyaan awoodaada shaqo.
Aynu eegno nooc kasta oo lacag bixin ah hoos;
Faa'iidooyinka Magdhawga Shaqaalaha Todobaadlaha ah
Kani waa nooca mushaharka lagu siiyo marka uu jiro dhaawac shaqada oo kaa diidaya inaad shaqeyso in ka badan todoba maalmood. Asal ahaan, waxaad xaq u yeelan doontaa dheefaha magdhowga toddobaadlaha ah.
Tusaale ahaan, gudaha Georgia, magdhowga shaqaalaha toddobaadlaha ah WWC waa saddex-meelood laba (ama 66%) celceliska mushaharkaaga toddobaadlaha ah (AWW) oo waxay dhammaataa $575 asbuucii (Xeerka Georgia §34-9-261).
Qadarkaani wuu ku kala duwanaan karaa gobolada kale, iyo daboolka toddobaadlaha ah wuu isbeddeli karaa sannadkii.
AWW-gaaga waxa lagu xisaabiyaa iyadoo la xisaabinayo celceliska dakhligaaga toddobaadyo ka hor dhaawaca shaqadaada.
Sidaa darteed, mushaharka dhaawaca shaqada wuxuu xisaabiyaa kaliya saddex-meelood laba meelood mushaharka caadiga ah.
Lacagaha Naafada Qayb ahaan
Haddii shaqaaluhu naafo yahay, oo natiijadu tahay inay qabato shaqo waqti-dhiman/yar, mushaharka dhaawaca waxaa loo xisaabin doonaa si kala duwan.
Waxa aad hesho waxaa lagu xisaabin doonaa iyadoo laga jarayo dakhligaaga hadda (ama awoodda aad ku kasbato) AWW hore. Markaas, tiradaas waxaa lagu dhufan doonaa saddex-meelood labo.
Tusaale ahaan, haddii aad hore u samayn jirtay $1,000 todobaadkii oo aad hadda heli karto $600, faraqa u dhexeeyaa wuxuu noqonayaa $400, saddex-meelood laba meelood $400 waxay noqonaysaa $240 todobaadkii faa'iidooyinka iinta qayb ahaan.
Iyadoo ku xiran sida uu u daran yahay dhaawacaaga, waxaa laga yaabaa inaad u qalanto inaad hesho magdhowga shaqaalaha toddobaadlaha ah ilaa 400 toddobaad laga bilaabo taariikhda dhaawacaaga. Haddii kale, waxaa laga yaabaa inaad sii wadato qaadashada dheefaha ilaa aad awoodid inaad ku noqoto shaqada.
Akhri: Sida looga codsado naafada Florida
Intee in le'eg ayaa lagugu siin karaa dhaawaca shaqada ka dib?
Waqtiga xaddidan ee lagugu siin doono dhaawac ka dib/ dhaawaca shaqada ayaa ku xiran darnaanta naafanimada/dhaawaca.
Naafanimada waxa loo kala saaray sidan:
Ku meel gaadh ah ama joogto ah
Wadar ama qayb
Tani waxay la macno tahay inay jiri karto:
Naafada guud ee ku meel gaadhka ah ama naafanimada qayb ahaan ku meel gaadhka ah halkaas oo dhaawacyadu wali soo kabanayaan lagana filayo inaad ka soo raynayso
Wadarta guud ee naafanimada joogtada ah ama naafanimada qayb ahaan joogta ah meesha aan la filayn inay xaaladdu ka soo rayn
Haddii aad leedahay naafo qayb ka mid ah, waxay la macno tahay inaad awood u leedahay inaad qabato noocyo shaqo oo caadi ahaan ah hawlo fadhiid ah. Wadarta naafanimada micnaheedu waa inaadan awoodin inaad ka shaqeyso nooc kasta oo shaqo ah.
Waa maxay naafanimada Joogtada ah ee ka imanaysa in lagu dhaawaco shaqada?
Naafanimada joogtada ah ee aan la filayn inay ka roonaato waa, tusaale ahaan, luminta addimada ama qayb kale oo jirka ah, dhaawac dhabarka oo joogto ah, lumis maqal, iwm.
Waxa kale oo loo tixraacaa inay gaadheen horumar caafimaad oo ugu sarreeya (MMI). Marka ay jirto naafo joogto ah oo ka timaada shaqada, qofku wuxuu awoodaa inuu helo faa'iidooyin dheer iyo mid sare.
Si aad u hesho dheefaha muddada-dheer, dhaawacu waa inuu saameeyaa awooddaada shaqo sidii aad horeba u shaqayn jirtay. Mar labaad, Qodobbada Magdhowga Shaqaalaha ee Gobolka waxay bixisaa faa'iidooyin iyadoo ku xiran qaybta jirka ay saameyso.
Mushahar kale oo aad heli karto haddii aad ku dhaawacantay shaqada
Haddii lagugu dhaawacmo shaqada, waxaad xaq u leedahay in lagu bixiyo daawayn kasta oo lagama maarmaan ah.
Tan waxaa ku jira kharashyada iyo gaadiidka ballamaha iyo baxnaaninnada xirfadda haddii aadan awoodin inaad ku noqoto shaqadii hore.
Si kastaba ha ahaatee, waa wax caadi ah in lagu galo arrimaha haddii loo-shaqeeyahaaga ama shirkadda caymisku ay aaminsan yihiin in daawayntaadu socotay muddo dheer.
Haddii shirkadda caymisku ay u aragto in daawayntaadu aanay daruuri ahayn ama macquul ahayn, waxa laga yaabaa inay diidaan inay bixiyaan. Sababtaas awgeed, waxaa laga yaabaa inaad buuxiso foomka magdhowga shaqaalaha gobolka.
Gobolka Georgia, waxaad buuxin doontaa WC-14 qaab. Sidoo kale waa fikrad wanaagsan inaad la tashato qareenka magdhawga shaqaalaha kaasoo kaa caawin kara inaad u dagaalanto xuquuqdaada.
Waa maxay xuquuqdaada sharci haddii lagugu dhaawaco shaqada?
Kuwa soo socda ayaa ah xuquuqdaada lagu siinayo haddii aad ku dhaawacdo shaqada.
Waxaa si sharci ah laguu oggol yahay inaad raacdo sheegashada magdhawga shaqaalaha adoon ka cabsanayn aargoosiga cidda aad u shaqayso.
Qareenka magdhawga shaqaalaha ayaa hubin kara in xuquuqdaada sharciga ah laga ilaaliyo loo-shaqeeyahaaga iyo shirkadooda caymiska.
Xuquuqdaas waxaa ka mid ah:
Xaqa aad u leedahay inaad ka xarayso dacwada dhaawacaaga ama jirada maxkamada magdhawga shaqaalaha ama maxkamada madaniga ah ee Georgia
Xaqa aad u leedahay inaad ku noqoto shaqadaada haddii laguu fasaxo inaad ku noqoto shaqada dhakhtarkaaga
Xaqa magdhowga naafada haddii aadan awoodin inaad ku soo laabato shaqada, si joogto ah ama si ku meel gaar ah, dhaawacaaga ama jirada awgeed.
Xaqa aad u leedahay inaad rafcaan ka qaadato go'aanka loo-shaqeeyahaaga, shirkadooda caymiska, ama maxkamadda
Xaqa aad u leedahay in lagu matalo qareen
Shaqaaluhu waa inuu sidoo kale fahmo inuu xaq u leeyahay inuu diido codsiyada ama dalabyada qaarkood. Tusaale ahaan, haddii loo-shaqeeyahaagu kugu dhiirigaliyo inaad isticmaasho caymiskaaga caafimaadka ama ku siiyo xoogaa dhiirigelin ah si uu isku dayo inuu kugu qanciyo inaad ka soo horjeedo xereynta sheegashada magdhawga shaqaalaha, waxaad xaq u leedahay inaad tiraahdo, maya.
Waa maxay Xuquuqdayda Shaqaale ahaan?
Ogow in sharciyada magdhawga shaqaaluhu ku kala duwan yihiin gobol ahaan iyo sidoo kale xuquuqda ay shaqaaluhu leeyihiin. Tani waxay sidoo kale khuseysaa hababka sharciga ah ee hubinaya xuquuqda.
Guud ahaan, waxaa jira dhowr xuquuqood oo sharci ah oo ku badan gobolada intooda badan:
xaqa aad u leedahay in aad dacwda dhaawaca ama jirrada ka xarayso maxkamada magdhawga shaqaalaha ama maxkamada warshadaha ee gobolka
xaqa aad u leedahay in aad aragto dhakhtar iyo in aad daawato
Haddii dhakhtarkaagu kuu fasaxo inaad ku laabato shaqada, waxaad xaq u leedahay inaad ku noqoto shaqadaada
Haddii aadan awoodin inaad ku soo laabato shaqada dhaawacaaga ama jirradaada dartii, ha ahaato mid joogto ah ama xataa si ku meel gaar ah, waxaad xaq u leedahay nooc ka mid ah magdhowga naafada.
waxaad xaq u leedahay in lagugu matalo qareen inta hawsha lagu gudo jiro.
Haddii aad ku khilaafsan tahay go'aan kasta oo uu gaaro loo-shaqeeyahaaga, shirkadda caymiska loo shaqeeyaha, ama maxkamadda magdhawga shaqaalaha, guud ahaan waxaad xaq u leedahay inaad rafcaan ka qaadato go'aankaas
Waxyeellada laga yaabo in lagugu magdhabo haddii lagugu dhaawacmo shaqada Georgia
Magdhawga shaqaalaha ee Joorjiya waxay dabooli doontaa oo kaliya qayb ka mid ah waxyeeladaada shilka. Tani waxay u badan tahay inay noqon doonto ilaa xadka baahida.
Waxaad u baahan tahay caawimada qareenka si aad u hubiso inaadan illoobin wax dhaawac ah oo laga soo kaban karo, xisaabiso wadarta gunnadaada, oo kaaga caawiyo inaad lacag u ururiso:
Kharashyada caafimaadka, sida saadka, qaliinka, iyo daawooyinka
Dakhli lumay, hore iyo mustaqbalka
Xanuun iyo rafaad, oo ay ku jiraan dhaawac maskaxeed
Ma jiraan qareeno magdhawga shaqaalaha bilaashka ah?
Waxaa jira tiro shirkado ah oo bixiya la tashi bilaash ah waxaana ka mid ah John Foy & Associates. Waxaad kala xiriiri kartaa iyaga (404) 400-4000 ama online wada tashi bilaash ah.
Dhaawaca noocee ah ayaa la iga bixin karaa?
Waxaad xaq u leedahay in lagu siiyo lacag marka lagugu dhaawacmo nooc kasta oo dhaawac ah oo ay sababto dayacaada ama khaladka loo-shaqeeyahaagu.
Caadi ahaan dhaawacyada goobta shaqada waxaa sababa dhacdooyin hal mar ah ama soo-gaadhis.
Kuwa soo socdaa waxay galayaan qaybta dhacdooyinka hal mar:
Shilalka simbiriirrada iyo dhaca;
Joog ka soo dhacaya;
Ku dhaawacmo shay ka soo dhacay joogga;
Dhaawacyo gubasho oo ka yimaada taabashada shilalka ah ee kiimikooyinka halista ah;
Shilka marka lagu shaqaynayo mishiinada khatarta ah;
Gaadhi culus oo lagu burburiyay;
Dhaawacyo ul irbad
Dhaawacyada soo-gaadhista waxaa ka mid noqon kara kuwan:
Xanuunka dhabarka ee ka yimaada qaadista joogtada ah ee alaabta culus iyada oo aan la helin taageero habboon;
Tinnitus ama maqal la'aanta ka timaadda soo-gaadhista dhawaaqa dheer ee joogtada ah;
Cudurrada neef-mareenka ee ka soo-gaadhista heerarka hooseeya ee qiiqa sunta ah;
Suxulka tennis-ka ee isticmaalka cududda iyo suxulka si isdaba joog ah si uu u qabto hawlo isku mid ah muddo dheer.
Laba Shuruudood oo Muhiim ah si aad ugu guulaysato Sheegashada Dhaawaca Shaqada
Si aad u fayl garaysato dacwad shil shaqo oo guul leh oo aad hesho lacagta dhaawaca ah, waa inaad caddaysaa taas:
Dhaawacyadaadu waxay sababeen shil goobta shaqada ah.
Shilka waxaa sabab u ahaa qof kale khaladkiisa ama dayacaad.
Waa maxay Xuquuqdayda Ka Dhanka ah Dhinacyada Aan ahayn Loo-shaqeeyahayga?
Sida aan kor ku soo sheegnay, mararka qaarkood dhaawaca shaqada waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay dayacaad dhinac saddexaad. Iyadoo ku xiran duruufaha, waxaad xaq u yeelan kartaa inaad keento dacwad ka dhan ah qofkaas ama ciddaas.
Kuwan waxaa loo yaqaan "dacwooyinka qolo saddexaad."
Caadi ahaan, sheegashooyinkan laguma xareeyo gunnada shaqaalaha. Hase yeeshe, waxay qaataan qaab dacwadaha madaniga ah waxaana lagu xareeyaa maxkamadaha gobolka ama federaalka.
Sheegashada dhinac saddexaad, guud ahaan waxaa laguu oggol yahay inaad raadsato magdhow xanuunka iyo silica, taas oo ah qayb ka mid ah waxyeelada "aan dhaqaale ahayn".
Guntii iyo gabagabadii, haddii aad ku dhaawacdo shaqada, waxa lagu siin doonaa lacag.
Faa'iidooyinka aad ku hesho sheegashada magdhawga shaqaalaha waa dib u bixinta kharashaadka caafimaadka iyo mushaharka lumay.
Sidaa darteed, maskaxda ku hay in lagu siiyo magdhow haddii aad ku dhaawacdo shaqada.
Baasaboorku waa dukumeenti rasmi ah oo ay bixiso dawlad, caddaynaysa aqoonsiga iyo jinsiyadda qofka haysta, xaqna u siinaya…
Maamulayaasha guud ayaa ah ilo dhiirigelin ah, gaar ahaan, dhalinyarada aan wali cagahooda helin laakiin…